केटीहरुले नुहाउँदा के सोच्छन ! आफैसँग छिल्लिन्छन् ? (भिडियो)
युवतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नाे शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् ।
यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको खोजीमा हुन्छन् ।
यसबारे केही बढी नै गम्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने
….युवती छिल्लेको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्….
त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टिकाउ हुनेछ ? के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला ? आदि सोचमा हराउने गर्दछन् । केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चिन्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै गम्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् ।
नुहाउँदा केटीहरू चिन्तित हुने अर्को विषय हो मोटोपना । अक्सर केटीहरू बाथरूमभित्र आफ्नो न-ग्न शरीर हेरेर आफ्नो फिगरबारे चिन्तित हुने गर्दछिन् । उनीहरूलाई त्यसबेला आफू मोटी भएको र अब शा-रीरिक व्यायाम थाल्नुपर्ने लाग्ने गर्दछ । केटीहरूले बाथरूममा आफ्नो प्रेमीको कल्पना समेत गर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
केटीहरूले नुहाउँदा आफ्नो फिगर, सुन्दरताबारे त चिन्तित हुन्छन नै त्यसका साथै उनीहरूलाई आफूले नुहाउँदा धेरै समय लगाएको र मानिसहरूले के भन्लान् भनेर समेत चिन्तित
त्यति मात्र होइन प्रेमी भएका केटीहरूआफ्नो प्रेमीबारे सोचेर लजाउने उसले गरेका प्रशंसाहरू सोचेर खुसी समेत हुने गर्छन् । केटीहरूले नुहाउँदा आफ्नो फिगर, सुन्दरताबारे त चिन्तित हुन्छन नै त्यसका साथै उनीहरूलाई आफूले नुहाउँदा धेरै समय लगाएको र मानिसहरूले के भन्लान् भनेर समेत चिन्तित हुने गर्दछन् । एजेन्सी
यो पनि – श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छन् यी चार राशी भएका पुरुषहरुले
कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ । कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् ।
ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह दशा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ । यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका पुरुषहरुको बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमतीलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ ।
मेष राशी यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको स’म्बन्ध राम्रो हुनाले एकअर्काको प्रेममा पागल हुने गर्छन् । एकअर्काको समस्या बुझ्ने र एक अर्काको समस्या पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरुको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ । यो राशी भएका पुरुषहरु बफादार हुने भएकाले पत्नीसँगको स’म्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ ।
वृश्चिक राशी यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् । परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पागल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् ।
कन्या राशी खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन् । घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् ।
सिंह राशी उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जि-द्दी र रिसा-लु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन् ।
प्रकाशित मिति January 21, 2021
आफ्नै छोरीको यस्तो भिडियो पत्रकार सम्मेलनमा देखाउन ‘बिवस बने बाबु’ (भिडियोसहित)
तस्बिरमा हेर्नुहोस् बलिउडका ६ मोटी नायिकाको ‘सेक्सी’ फिगर यात्रा